Labsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Labsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu
Labsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu
Qabsoon Oromoo sadarkaa Labsiin Yeroo Muddamaa too'atuu ol taateerti
Tankaarfii humni Agaazii jiraattota Naqamtee irratti fudhataa jiruun lubbuun Abbabbaa Mokkonninii darbuu fi dargaggoonni 15 ol madaayuun beekame. Ajjeechaan kan rawwatamaa jiru namoota tankaarfii mootummaa mormuun gara daandiitti bayan irratti.
Erga sanbata darbe humni Agaazii hooggannoonni KFO magaalaa Naqamtee akka hin seenne dhoogee kaasee magaalaan Naqamtee dirree mormii cimaatti geeddaramtee jirti. Dallansuun ummata gara daandiitti kan baasu malee akka Woyyaaneen yaaddee turte sodaa Labsii Yeroo Muddamaan (LYM) kan ummata manatti hanbisu hin turre. Hirirri simannaa hoogganoota KFO battalumatti gara hiriira mormii sirna Woyyaaneetti geeddarame. Yeroo LYM labsamee jiruti kuni ta’uun Woyyaaneef tuffiidha. kanaaf gara tankaarfii humnaa fudhachuutti ce’an- ummata nagaa irratti dhukaasa banan.
Mootummaan Woyyaanee fi kittillayyoonni isaa abdii godhaa kan turan LYM ummata daandii irraa dhiibee manaatti galcha kan jedhu ture. Kan mudhataa jiru garuu faallaa isaati. Erga LYM labsamee, keessumattuu humni Agaazii daandii irratti naqamee, ummata socho’uu dhoorguun, ummata daran dallansiisuu fi gara mormiitti kakaasuun isaa ifa ta’aa dhufeera. Haalli guyyoottan darbaniif Naqamtee keessatti mudhate kan waa xxiinxalluuf waan dubbatu heddu qaba. Kittillayoonni Woyyaanee ‘labsi yeroo muddamaan nu dhaqqabaa’ jedhaa mootummaa isaanii cinqaa turan bakki amma qabsoon Oromoo gaye sadarkaa Labsiin Yeroo Muddamaa too’aatuu ol ta’uu isaa garuu ni hubatuu?
Previous articleDr. Abiyyi Ahmad Dura Taa’aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A Dura Taa’aa DhDUO ta’uudhaan filatamaniiru
Next articleLabsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu